Ny Honor 8 dia hanana fanavaozana "azo antoka" roa taona | Androidsis
Ny Honor 8 dia hanana fanavaozana "azo antoka" roa taona
Ny iray amin'ireo olana lehibe misy fiatraikany amin'ny rafitra Android dia ny fanaparitahana ireo kinova marobe misy eo amin'ireo mpampiasa sy ny fitaovana.
Soa ihany fa nanome toky an'io ny orinasa Honor (subsidiary Huawei) Honor 8 dia hanana fanavaozana 24 volana azo antoka Ka ny mpividy izao dia afaka milamina kokoa.
1 Ny Honor 8 dia hanana fanavaozana isaky ny telo volana, saingy amin'ny pirinty tsara
1.1 Ary ahoana ny amin'ny pirinty tsara?
Ny Honor 8 dia hanana fanavaozana isaky ny telo volana, saingy amin'ny pirinty tsara
Ny sainan'i Honor vaovao, Honor 8, dia manana zavatra betsaka momba azy io amin'ny lafiny endri-javatra sy fiasa, ary ankehitriny dia manampy zavatra hafa. Araka ny voalazan'i Taylor Kimberly, mpitantana ny vokatra ao amin'ny orinasa, Honor 8, ary angamba maodely mifandimby, dia hahazo fanavaozana rindrambaiko mandritra ny 24 volana aorian'ny fandefasana azy:
Manomboka amin'ity taona ity, manolo-tena izahay hanome ny mpanjifa fidirana amin'ny endri-javatra vaovao (farafahakeliny indray mandeha isaky ny telo volana mandritra ny 12 volana voalohany) hatramin'ny 24 volana aorian'ny fanombohan'ny vokatra. Hanohy hanome fahazoana miditra amin'ny fiarovana sy fanavaozana ny rindrambaiko izahay hanitsiana ireo bibikely sy hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fotoana mety.
Fantatry ny rehetra fa manana fahasahiranana lehibe ny fitaovana Android amin'ny fahazoana ireo fanavaozana farany amin'ny fotoana mety aorian'ny famoahana azy ireo. Noho izany, ny fanambarana ho an'ny Honor 8 dia tsy isalasalana fa vaovao lehibe tokony horaisin'ireo orinasa hafa.
Ary ahoana ny amin'ny pirinty tsara?
Na izany aza, tsy voatery hidika izany fa ireo fanavaozana isan-telovolana ireo dia ho avy eo ary hiantso ireo kinova Android farany indrindra. Taylor Kimberly dia mampanantena "fisehoan-javatra vaovao" isam-bolana vitsy monja fa "hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa izy ireo."
Araka ny voamarika amin'ny fomba tena marina avy amin'ny 9to5Google, ny teny hoe Fanambarana Honor 8 dia somary misafotofoto ihany. Mampanantena fanavaozam-baovao farafahakeliny 12 volana farafahakeliny ny lahatsoratra tany am-boalohany, ary miresaka "hatramin'ny" 24 volana. Adika amin'ny hisy fanavaozana 24 volana farafahakeliny. Avy amin'i Huawei dia manamarina izy ireo fa marina io fandikana io, izany hoe ny Honor 8 sy ny finday avo lenta dia hankafy ny fanavaozana hatramin'ny 24 volana. Ary fantatrao izay mitranga amin'ny dokam-barotra amin'ny "to" sy "avy", tsy hitanay mihitsy io lobaka io "hatramin'ny" 1,99 € na ny fihenan'ny "hatramin'ny" 80%.
Ny voninahitra 8 Huawei dia hamidy tsy ho ela amin'ny vidiny $ 399
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Honor 8 dia hanana fanavaozana "azo antoka" roa taona
Ny simulator mitaingina zava-misy sy mahafinaritra indrindra dia ny Steppy Pants